अमेरिकाको एसिया–प्रशान्त रणनीति अब के होला ? - Karobar National Economic Daily
अमेरिकाको एसिया–प्रशान्त रणनीति अब के होला ?
query_builderMarch 24, 2017 1:13 PM supervisor_accountनि फेङ visibility1682
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सन्तुलनका लागि ओबामा प्रशासनले गरेको प्रयास औपचारिक रूपमै मृत भइसकेको उपविदेशमन्त्री सुसान थ्रोनटनललाई उद्धृत गर्दै गत साता सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । हालको डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नै खाले स्वरूप बनाउने दाबी पनि थ्रोनटनले गरेका छन् ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव घट्दै गएको समयमा पुनर्सन्तुलनको रणनीति अगाडि सारिएको छ । यो रणनीतिले उच्च सतर्कता आकर्षित गरे पनि यसले विभिन्न किसिमका क्षेत्रीय समस्या बल्झाउन सहयोग गरेको छ ।
अमेरिकाले यो क्षेत्रमा आफ्ना मित्रहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरेको दाबी गरे पनि यो क्षेत्रमा थोरै मात्र आर्थिक लगानी गर्दै आएको छ । यसको उदाहरणमा दक्षिण कोरिया र जापानलाई लिन सकिन्छ ।
ओबामा प्रशासनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि ठूलो महत्व दिने प्रयास गरेको भए पनि अमेरिकाले क्षेत्रका लागि उपयुक्त बजेट दिन सकेको छैन । उसले स्वदेशकै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन, हेल्थ केयरमा ध्यान दिन, रोजगारी बजार र वित्तीय क्षेत्रलाई चुस्त बनाउनका लागि अमेरिकाले बाह्य मुलुकलाई दिने सहयोगमा कटौती गर्ने निधो गरिसकेको छ ।
पुनर्सन्तुलनको रणनीतिले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाएको छ । विगतमा अत्यन्त शान्त रहेको साउथ चाइना सी हाल आएर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र भएको छ । गत वर्ष अमेरिकाले चीनविरुद्ध फिलिपिन्सलाई उचालेपछि यो अवस्था पैदा भएको हो ।
दियाओ टापुको विषयलाई लिएर चीन– जापानबीचको तनाव पनि बढ्दो अवस्थामा छ । अमेरिकी रक्षा प्रमुख कार्टरले आफ्ना जापानी समकक्षी टोमोमी इनाडालाई गत डिसेम्बरमा अमेरिका–जापानबीचको द्विपक्षीय सुरक्षा सन्धिले दियाउ टापुको रक्षाको विषयलाई पनि समेट्ने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए ।
वासिङ्टनले बेइजिङसँगको बार्गेनिङ विधि प्रयोग गर्नका लागि ताइवानको विषयलाई पनि उचाल्दै आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले ताइवानी राष्ट्रपतिलाई गरेको टेलिफोन वार्तालाई लिन सकिन्छ ।
हालको अवस्थामा ट्रम्पको एसिया–प्रशान्त नीतिका बारेमा अनुमान गर्न कठिन देखिएको छ । ट्रम्पले ओबामा लिगेसीलाई हटाएका छन् र कार्यकाल सुरु गरेकै दिन ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट फिर्ता हुने घोषणा पनि गरेका छन् ।
तर, यसैबीच ट्रम्पले आफ्ना अग्रजहरूको रणनीतिक सुरक्षा नीतिहरूलाई आत्मसात् पनि गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणुको विषयलाई विशेष महत्वपूर्ण दिन सक्छन् ।
उनले अभियानको समयमा जापान र दक्षिण कोरियाले अमेरिकाले यी मुलुकलाई गरेको सुरक्षाको बदलामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, यो तर्कका बाबजुद पछिल्लो समयमा आएर क्षेत्रमा अमेरिकी मित्र राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।
अमेरिका शतप्रतिशत दक्षिण कोरियाको साथमा रहने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् । ट्रम्पले जनवरीमा प्योङयाङको परमाणुको विषयलाई लिएर अमेरिकाले शतप्रतिशत दक्षिण कोरियाको सुरक्षाका लागि हरतरहका प्रयास गर्ने बताएका थिए ।
तर, ट्रम्पको मातहतमा औचित्यमा परिवर्तन आउन सक्नेछ । नयाँ प्रशासनले उत्तर कोरियाको परमाणु संकटको विषयलाई बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । उसले साउथ चाइना सीको विषयलाई थाति राख्दै उत्तर कोरियाको परमाणुको विषयलाई विशेष महत्वपूर्ण दिनु आवश्यक छ ।
चीनले क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्यलाई बढाउनेछैन । ट्रम्प प्रशासनको मातहतमा दुई मुलुकले बारम्बार र बृहत् सहयोगका साथ आपसी लाभलाई बढावा दिन सक्छन् ।चीन र अमेरिका आपसी सहयोगको विषयलाई दुवै पक्षलाई लाभ दिन सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्छन् ।
अमेरिकाले दक्षिणपूर्वी एसियाको तुलनामा उत्तरपूर्वी एसियालाई बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । ट्रम्पले मस्कोसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन प्रस्ताव पनि गरेका छन् । ठूलो अवस्थाको शक्तिको खेलले ट्रम्पको एसिया नीतिमा थप भार पार्न सक्नेछ ।
ट्रम्पले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा पुनः सन्तुलनको रणनीति हटाएपछि अमेरिका–चीन सम्बन्धमा बेइजिङलाई रोक्नका लागि हुने सर्वत्र विश्वास लिइँदै आएको छ । यो पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।
सुरुमा ट्रम्पले बेइजिङको एक चीन नीतिको विरुद्धमा बोलेका थिए । तर, ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको फेबु्रअरीमा भएको पहिलो टेलिफोन वार्तापछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार आएको छ । चीन–अमेरिका सम्बन्धमा उतारचढाव आउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । यो पनि विशेष गरी ट्रम्पको सुरुका दुई महिनाको अवधिमा देखा परेको छ ।
दुई मुलुकबीचको सहयोगलाई नयाँ किसिमको विशेष शक्ति सम्बन्धका रूपमा ल्याउन र सबल बनाउन पनि समयको आवश्यकता पर्छ । यो रातारात हुने विषय पक्कै पनि होइन । चीन–अमेरिका सम्बन्धमा ट्रम्प प्रशासनले व्यापार र आर्थिक मुद्दाहरूलाई बढी केन्द्रित गर्ने देखिन्छ ।
ट्रम्पले एसिया–प्रशान्तको नीतिको ठाउँमा पेन्टागन र ह्वाइट हाउसमा कसैलाई पनि मनोनयन नगरेकाले केही पश्चिमा विद्वान्हरू चिन्तित देखिएका छन् । उनीहरूले यो अवस्थालाई ‘पोलिसी भ्याकुम’ को रूपमा हेरेका छन् ।
यो अवस्थालाइ चीनले अवसरका रूपमा आफ्नो हातमा लिन सक्ने डर उनीहरूमाझ रहँदै आएको छ । यो अवस्थालाई चीनले एसिया–प्रशान्त मामिलामा आफ्नो चासो बढाउन सक्ने डर उनीहरूमाझ छ । यस किसिमको चासो लिनु आवश्यक छैन ।
(लेखक चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सेसको इन्स्टिच्युट अफ अमेरिकन स्टडिजका उपनिर्देशक हुन् ।)
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका एसिया–प्रशान्त